उत्तम ई-वाणिज्य को लागी कार्ट त्याग को कम रणनीतिक युक्तिहरु - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
उत्तम ई-वाणिज्य को लागी कार्ट त्याग को कम रणनीतिक उपायहरु
सम्पादकको पिक मार्च 25, 2021 मार्च 23, 2021 zoya Scoot B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
% 55% ग्राहकहरूले दावी गर्छन् कि उच्च शिपिंग दर उनीहरूलाई किनमेल कार्ट छोड्नुको कारण हो।
किनमेल कार्ट त्यागको अर्को कारण जटिल अर्डरिंग र चेकआउट प्रक्रियाहरू हो।
उपयुक्त भुक्तानी विकल्प नपाउनु कार्ट त्यागको कारण पनि हो।
एक ई-वाणिज्य स्टोर को उद्देश्य उत्पादन बेच्नु हो। यद्यपि धेरै ग्राहकहरूले तल लाइनमा पुग्दा कार्ट त्याग्छन्।
सबै त्यागी उद्योगहरूको लागि औसत परित्याग कार्ट दर .69.57 .XNUMX ..XNUMX% हो। त्यहाँ रणनीतिहरूको एक संख्या तपाईं ई-वाणिज्य स्टोर को लागी कार्ट त्याग घटाउन लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, म्यागेन्टो स्टोर मालिकहरूले ग्राहकलाई ईमेल, व्हाट्सएप, वा एसएमएस मार्फत उनीहरूलाई सूचित गरेर शपिंग कार्ट त्यागको बारेमा सम्झाउन सक्छन्। म्याजेन्टो २ का लागि परित्याग गरिएको कार्ट सुइट.
कार्ट त्याग प्रत्येक ई-वाणिज्य व्यवसाय को लागी एक सामान्य घटना हो, तर केहि मुट्ठीपूर्ण युक्तिहरु संग, तपाईं दर कम गर्न र ती ग्राहकहरु फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्ट त्याग र यसको समाधानको लागि Primary प्राथमिक कारणहरू:
किनमेल कार्ट त्यागको लागि विभिन्न कारणहरू छन्। यसको केहि छविहरू तल छविमा देख्न सकिन्छ:
छवि स्रोत - मूसन्ड।
यहाँ हामीले शपिंग कार्ट परित्याग गर्ने प्रमुख कारणहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र कसरी तपाईं यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ।
१. अतिरिक्त शुल्क
किनमेल कार्ट त्यागको एक आधारभूत कारण शिपिंगको लागि अतिरिक्त लागतहरू हुन्। यसमा करहरू, लुकेका लागतहरू, र अप्रत्याशित शिपिंग लागतहरू सामेल छन्।
मानौं एउटा उत्पादनको लागत $ २० छ। चेकआउटको अन्तिम चरणमा पुग्दा, यसले अधिक शिपिंग लागत र करहरूको लागि $ 20 देखाउँदछ। तपाईं निश्चित रूपमा खरीद पूरा गर्नुहुने छैन किनकि यो तपाईंको लागि पूर्ण अप्रत्याशित छ। अनलाइन ग्राहकको रूपमा कहिले अनुभव गर्नुभयो?
यसको मतलब ई-वाणिज्य स्टोरहरू किनमेल र अतिरिक्त लागतको साथ पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। उत्पादन पृष्ठहरू र चेकआउटको प्रारम्भिक चरणमा कूल शिपिंग र करहरू देखाउनुहोस् ताकि ग्राहकहरू के तिर्नेछन् भन्ने बारे राम्ररी सचेत छन्।
कहिलेकाँही ग्राहकहरुलाई नि: शुल्क शिपिंग प्रदान गर्नुहोस् वा कार्ट त्याग घटाउन शिपिंगको लागि कम्तिमा छूट मूल्य। तलका परिस्थितिहरूमा निःशुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्नुहोस्
पहिलो पटक ग्राहकहरु
सीमित समय अवधि
परित्याग गरिएको कार्ट ग्राहकहरु लाई फर्काउन
न्यूनतम अर्डर मानको लागि
२. जटिल चेकआउट प्रक्रिया
२२% ग्राहकहरू भन्छन् कि उनीहरूले शपिंग कार्ट त्यागेको छ किनकि उनीहरूलाई खाता सिर्जना गर्न बाध्य पारिएको छ। जबकि%% ग्राहकहरु भन्छन् कि तिनीहरूले लामो र अस्पष्ट चेकआउटको कारण कार्ट छोडे।
कहिलेकाँही प्रयोगकर्ताले चेकआउट पुरा गर्न कहाँ क्लिक गर्ने भनेर फेला पार्न सक्दैनन्। वा ग्राहकलाई विवरण प्रविष्ट गर्न भनियो, फेरि र फेरि, परिणाम कार्ट त्यागमा। ग्राहकहरूलाई खाता सिर्जना गर्न बाध्य पार्नु पनि किनमेल कार्ट त्यागको कारण हो।
अतिथि चेकआउटलाई ग्राहकहरूलाई अनुमति दिनुहोस्, ताकि ग्राहकहरूले तपाईंको ई-कमर्स स्टोरमा दर्ता नगरी अर्डर गर्न सक्दछन्। उनीहरूले अर्डर गरे पछि, तपाईं तिनीहरूलाई खाता बनाउनको लागि प्रोम्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरू चाहानुहुन्छ। जटिल चरणहरू हटाउँदै, एकल क्लिकको साथ ग्राहकहरूलाई दर्ता गर्न अनुमति दिनुहोस् गुगल एक ट्याप लगइन म्याग्न्टो २ का लागि। यो गर्नाले शपिंग कार्ट त्यागहरू कम हुनेछ विशेष गरी पहिलो पटकका ग्राहकहरूका लागि।
तपाईंको ई-वाणिज्य स्टोरको चेकआउट प्रक्रियालाई स्पष्ट, सीधा र बाधा-रहित बनाउनुहोस्। कार्यको लागि स्पष्ट कल छ, साईटमा पछाडि बटन थप्नुहोस् र कुनै पनि समयमा सम्पादन कार्टलाई अनुमति दिनुहोस्।
Pay. भुक्तानी सुरक्षा
कार्ट त्यागको अर्को कारण भुक्तानको लागि ग्राहकको विश्वासको कमी हो। उपयुक्त भुक्तानी विकल्प नपाउनु कार्ट त्यागको कारण पनि हो।
Pers०% खरीददारहरूले शपिंग कार्ट छोड्नेछ यदि उनीहरूले उनीहरूको मनपर्दो भुक्तानी विधिहरू फेला पार्न सकेन भने। Payment१% खरीदारहरूले शपिंग कार्ट छोड्नेछन् किनभने उनीहरू भुक्तान सुरक्षाका बारे निश्चित छैनन्।
सुरक्षा प्रमाणको कमीको कारण, प्रयोगकर्ताले उनीहरूको क्रेडिट कार्ड जानकारी तपाइँको ई-वाणिज्य साइटमा साझेदारी गर्न असहज महसुस गर्दछ। जब प्रयोगकर्ताले भुक्तानी विधिमा सुविधा पाउन सक्दैन, सम्भावनाहरू छन् उनीहरूले कार्ट छोड्छन्।
यसलाई पार गर्न, तपाईंको ई-कमर्स स्टोरमा सबै लोकप्रिय भुक्तानी विकल्पहरू सहित ग्राहकहरूको लागि चेकआउट प्रक्रिया अनुकूल बनाउँदछ। यसबाहेक, तपाईंको ई-वाणिज्य स्टोरको विश्वास, विश्वास, र विश्वसनीयता निर्माण गर्न तपाईंको साइटमा ट्रस्ट ब्याज समावेश गर्नुहोस्।
तपाइँको साइट मा सामाजिक प्रमाण जोड्नुहोस्। जब ग्राहकहरु अन्य ग्राहकहरु लाई तपाईको उत्पादनहरु को प्रयोग को लागी वा न्यूजलेटर को लागी हस्ताक्षर गर्न को लागी हेर्नुहोस्, तिनीहरू तपाइँबाट किन्न उचित लाग्छ।
Deli. डेलिभरी र रिटर्न नीति
जब किनमेलकर्ताहरू आफ्ना उत्पादनहरूको डेलिभरीको बारेमा निश्चित हुँदैनन् र फिर्ती नीति के हो, यो शपिंग कार्ट त्यागको कारण हुन्छ।
असन्तुष्ट रिटर्न पॉलिसीको कारण १० मध्ये १ उपभोक्ताले कार्ट छोड्नेछन् र% 1% ले लामो अवधिमा वितरणको लागि कार्ट छोड्नेछ।
हो, यदि उत्पादन डेलिभरीमा अधिक समय लिन्छ भने, ग्राहकहरू अन्य साइटहरूमा स्विच गर्दछ जसले छिटो डेलिभरीहरू प्रस्ताव गर्दछ। थप रूपमा, यदि उत्पादनहरूको फिर्ती जटिल छ र फिर्ताको लागि अतिरिक्त लागत समावेश गर्दछ भने, तपाईंको त्यागिएको कार्ट अनुपात निश्चित रूपमा बढ्नेछ।
तिनीहरूलाई राख्न ग्राहकहरुलाई उत्पादनको द्रुत डेलिभरी प्रदान गर्नुहोस्। तपाईंको फिर्ती नीति क्रिस्टल स्पष्ट बनाउनुहोस्। नि: शुल्क फिर्ताको अनुमति र फिर्ताको लागि विस्तारित समयले ग्राहकहरूको विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ जुन खरीदको बारेमा शंकास्पद छन्।
पारदर्शी वापसी नीति को लागी तरीका:
लम्बाई फिर्ताको मिति
नि: शुल्क प्रतिफल
साइटमा फिर्ती नीतिको स्पष्ट विवरण
गलत डेलिभरीको लागि क्षतिपूर्ति
Site. साइट अनुकूलन
अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू सबैभन्दा धैर्य हुन्छन्। तिनीहरू पृष्ठ लोड गर्न अधिक समय पर्खने छैनन्। लामो चेकआउट फारमहरू पनि कार्ट त्यागको कारण हो।
Of 57% ग्राहकहरूले कार्ट त्याग्नेछन् यदि तिनीहरूले पृष्ठ लोड गर्न तीन सेकेन्ड भन्दा बढी कुर्नु पर्‍यो भने। र ती मध्ये %०% कहिल्यै फर्कने छैन जुन बढी डरलाग्दो छ।
अनावश्यक फारम क्षेत्रहरूले ग्राहकहरूलाई निराश बनाउँछ र तिनीहरूले कार्ट छोड्छन्। ग्राहकहरुलाई शिपिंग र भुक्तान जानकारी प्रविष्ट गर्न सोध्नु, फेरि र फेरि, चेकआउट प्रक्रियालाई जटिल बनाउँदछ।
तपाईंले आफ्नो साइट पूर्ण रूपले अनुकूलित राख्न र पृष्ठ लोड गति तीन सेकेन्ड अन्तर्गत राख्नु पर्छ। तपाईंको ई-कमर्स साइट छिटो बनाउन संकुचित छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
चेकआउट फारममा ग्राहकहरूलाई आवश्यक जानकारीको लागि मात्र सोध्नुहोस्। वा यदि तपाईंले थप फाईलहरू समावेश गर्नुभयो भने, ग्राहकहरूलाई विवरणहरू भर्नका लागि तिनीहरूलाई अनिवार्य नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
यद्यपि शपिंग कार्ट परित्यागका लागि थुप्रै कारणहरू छन्, तर दोष सधैं ई-वाणिज्य स्टोरहरूमा हुँदैन। त्यहाँ अन्य धेरै कारणहरू छन् जुन ग्राहकहरूले शपिंग कार्ट त्यागेर जान्छन्।
त्यहाँ यस्तो अवस्था हुन सक्छ जहाँ प्रयोगकर्ताले शप गर्न इच्छुक छैन तर गल्तीले कार्टमा आईटमहरू थप्दछ। धेरै चोटि प्रयोगकर्ताहरूले कार्टमा केहि आईटमहरू थप्छन् र अन्य वस्तुहरू पछि थप्छन् किनभने तिनीहरू काममा ढिला भइरहेका छन्। धेरै पटक प्रयोगकर्ताहरू बसमा बसिरहेको बेला किनमेल गर्छन् र खरीद समाप्त गर्नु अघि तिनीहरू स्टेशनमा पुग्छन्। यो सबै शपिंग कार्ट त्याग गर्न नेतृत्व गर्दछ।
माथिका कारणहरूको बावजुद, तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्णतया छोड्नुभएको गाडाहरूको लागि फिर्ता लिन बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ मैले शपिंग कार्ट परित्याग लाई कम गर्न केहि राम्रो रणनीतिक सल्लाहहरुमा छलफल गरेको छु।
१. तिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस्
यो गलत हो कि तपाई ग्राहकको दिमागमा केवल एक हुनुहुन्छ। त्यहाँ खरीद गर्न अघि उनीहरू धेरै ब्रांड्स भ्रमण गर्छन्। तिनीहरूले धेरै कार्ट छोडेको हुन सक्छ तिनीहरूले तपाईंको ई-वाणिज्य स्टोरको लागि गरे। त्यसोभए, ग्राहकहरू को बारेमा सम्झाउनुहोस् कि तपाईं को हुनुहुन्छ, तपाईंको साइटमा उनीहरूले के गरे, र तिनीहरूले के छोडे। तिनीहरूलाई पुन: प्राप्त गर्न यो एक ठूलो चाल हुन सक्छ।
२. जरुरीताको भाव
शपिंग कार्ट त्यागलाई कम गर्ने अर्को तरिका FOMO (मिसिंग आउटको डर) प्रविधि लागू गर्नु वा जरुरीताको भावना सिर्जना गर्नु हो। प्रयोगकर्ताहरू देखाउनुहोस् कि प्रस्तावहरू सीमित समयको लागि मात्र उपलब्ध छन्। जरुरीताको भावनाले ग्राहकहरुलाई तुरुन्तै किनमेल गर्छ।
Coup. कूपन र छुट प्रस्ताव
तपाईंले ग्राहकहरूलाई कार्टमा थपेका उत्पादनहरूमा छुट प्रदान गरेर ग्राहकहरू पुनः सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कम मूल्यमा उत्पादन प्राप्त गर्ने मौका हराउने डरको साथ, ग्राहकहरूले सकेसम्म छिटो किनमेल पूरा गर्नेछन्।
A. लाइभ च्याट विकल्प समावेश गर्नुहोस्
यदि ग्राहकले किन किन उनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तरको लागी सम्पर्क गर्न को लागी शिपिंग गर्नु हुन्न भने, यसले कार्ट त्याग्नेछ। तपाईंको साइटको साथ लाइभ च्याट विकल्प एकीकृत गर्न उच्च स्तरमा कार्ट त्याग रोक्न मद्दत गर्दछ। प्रत्यक्ष कुराकानीले ग्राहकको सन्तुष्टि र स्टोरको प्रयोगकर्ता अनुभव बढाउँदछ।
Display. प्रदर्शन उत्पाद समीक्षा
ग्राहक समीक्षा, रेटिंग्स, प्रशंसापत्र, र ग्राहकहरू तपाईंको ई-वाणिज्य स्टोरको सामाजिक प्रमाण सिर्जना गर्नका लागि तपाईंको फोटोको फोटो प्रयोग गर्नुहोस्। यसले कम शपिंग कार्ट परित्यागमा पनि डो .्याउँछ किनभने ग्राहक विश्वस्त छ र शपिंगको लागि तपाईंको साइटलाई विश्वास गर्दछ।
तपाईंको ई-कमर्स स्टोरको लागि माथिको सल्लाहहरू कार्यान्वयन गर्नाले निश्चित रूपमा तपाईंलाई शपिंग कार्ट त्यागलाई कम गर्नमा मद्दत गर्दछ। यद्यपि, प्रत्येक व्यवसायको फरक कम स्पॉट हुन्छ। यसैले हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईको कम्पनीको लागि हानिकारक पोइन्टहरू छानबिन गर्नुहोस् र त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्।
यस बाहेक, यी रणनीतिहरू कार्यान्वयन पछि सफलता मापन गर्न तपाईंको कार्ट त्याग दर ट्र्याक राख्नुहोस्।
* लेखमा उल्लिखित सबै तथ्यहरू र तथ्या S्क स्लीक्नोटबाट लिइएको हो।
सांप्रदायिक समाचार इकमर्स magento2magento
हबस्पट प्रमाणित ईनबाउन्ड मार्केटिंग विशेषज्ञ र MageComp मा सामग्री मार्केटर
ग्वाटेमालामा अन्वेषण यात्रा
तपाइँको ब्यापारको लागि कर्ब अपील कसरी सुधार गर्ने